Igunya likaNkulunkulu liyingqayizivele. Liyinkulumo echaza, into ekhethekile, nobuntu bukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Azikho izinto ezidaliwe nezingadaliwe ezichazwa ngale ndlela nanjengesimo esikhethekile; uMdali kuphela onalolu hlobo lwegunya. Okusho ukuthi, nguMdali kuphela—uNkulunkulu Oyingqayizivele—ochazwa ngale ndlela nonalesi simo. Kungani sikhuluma ngegunya likaNkulunkulu? Igunya likaNkulunkulu Ngokwakhe lihluke kanjani egunyeni elisengqondweni yomuntu? Yini ekhethekile ngalo? Kungani kubalulekile ukukhuluma ngalo lapha? Ngamunye wenu kufanele acabangisise ngale ndaba. Ngoba kubantu abaningi, “igunya likaNkulunkulu” liyinto edidayo, futhi lokho kunzima ukukugxilisa ekhanda lomuntu, futhi maningi amathuba okuthi izingxoxo ezikhuluma ngalo nazo zidide. Ngakho kuzoba negebe phakathi kolwazi ngegunya likaNkulunkulu umuntu alicabangayo, negunya likaNkulunkulu ngokwalo. Ukuvala leli gebe, umuntu kumele alazi kancane kancane igunya likaNkulunkulu ngosizo lwabantu bangempela, izehlakalo, izinto noma imicabango engaphakathi kumuntu, abantu abakwazi ukuyiqonda. Nakuba inkulumo ethi “igunya likaNkulunkulu” ingase ibonakale ingaqondakali, igunya likaNkulunkulu aliyona neze into engachazeki. Uhlale enomuntu ngaso sonke isikhathi ekuphileni kwakhe, emhola zonke izinsuku. Ngakho, ekuphileni kwansuku zonke kwawo wonke umuntu, uzobona izinto ezinokwethenjelwa zegunya likaNkulunkulu. Lezo zinto ziwubufakazi obanele bokuthi igunya likaNkulunkulu likhona ngempela, futhi libavumela ngokugcwele abantu ukuba babone futhi baqonde iqiniso lokuthi uNkulunkulu unalo leli gunya.
Ngokwezinga eliphansi, zonke izintaba, imifula, amachibi, ulwandle, namazwekazi anabantu emhlabeni, zonke izinkathi zonyaka adlula kuzo, zonke izinto ezihlala emhlabeni, okubandakanya izihlahla, izilwane, izilwanyana ezincane, nabantu, kungumsebenzi wobukhosi bukaNkulunkulu, futhi kulawulwa uNkulunkulu. Ngaphansi kobukhosi nokulawula kukaNkulunkulu, konke kuba khona noma kunyamalale ngokuvumelana nemicabango Yakhe, ukuphila kwakho kuqondiswa imithetho ethile, kuyakhula futhi kwande. Akekho umuntu noma into engaphezu kwale mithetho. Kungani kunjalo? Okuwukuphela kwempendulo ukuthi, kungenxa yegunya likaNkulunkulu. Noma, ukukubeka ngenye indlela, kungenxa yemicabango kaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu; uNkulunkulu uqobo Lwakhe ukwenza konke. Lokho kusho ukuthi, yigunya likaNkulunkulu nomqondo kaNkulunkulu okumisa le mithetho; iyogudluka futhi ishintshe ngokuvumelana nemicabango Yakhe, futhi konke lokhu kugudluka nokushintsha kwenzeka noma kunyamalale ngenxa yecebo Lakhe. Cabanga ngezifo eziwubhubhane ngokwesibonelo. Ziqubuka ngaphandle kwesexwayiso, akekho owazi imisuka yazo noma izizathu zangempela zokwenzeka kwazo, futhi noma isiphi isifo esiwubhubhane esifinyelela endaweni ethile, labo abaneshwa bayehluleka ukuphunyuka enhlekeleleni. Ososayensi bacabanga ukuthi izifo eziwubhubhane zibangelwa ukusabalala kwezilwanyana ezincane eziyingozi nezilimazayo, futhi ijubane nendlela eziyisebenzisayo ukuze zithelele isifo kwabanye ayinakuqagelwa noma ilawulwe yinoma imuphi usosayensi ongumuntu. Nakuba isintu senza konke esingakwenza ukumelana nazo, abakwazi ukulawula ukuthi yibaphi abantu noma izilwane ezithelelekayo lapho kuqubuka lezi zifo eziwubhubhane. Okuwukuphela kwento umuntu angayenza ukuzama ukuzigwema, ngokucwaninga ngazo. Kodwa akekho owazi umnyombo wangempela ochaza ukusuka nokuhlala kwanoma isiphi isifo esiwubhubhane, futhi akekho ongasilawula. Bebhekene nokuqubuka nokusabalala kwesifo esiwubhubhane, into yokuqala abantu abayicabangayo ukusungula umuthi wokusigomela, kodwa ngokuvamile isifo esiwubhubhane size siziphelele sona ungakalungi nomuthi wokusigomela. Yini eyenza izifo eziwubhubhane ziphele? Abanye bathi amagciwane asuke eselawuleka, kanti abanye bathi siphela ngenxa yokushintsha kwezinkathi zonyaka …. Ukuthi lokhu kuqagela kuyiqiniso yini, ososayensi abaphawuli lutho ngalokho, ayikho impendulo eqondile abayinikezayo. Lokho isintu esibhekene nakho akukona nje ukuqagela, kodwa ukuntula kwesintu ukuqonda nokwesaba izifo eziwubhubhane. Ekugcineni, akekho owaziyo, ukuthi izifo ziqalwa futhi ziqedwe yini. Ngenxa yokuthi abantu banokholo kuphela kuyisayensi, bancika ngokuphelele kuyo, kodwa abaliqapheli igunya loMdali noma bamukele ubukhosi Bakhe, abasoze bayithola impendulo.
Ngaphansi kobukhosi bukaNkulunkulu, zonke izinto ziba khona futhi zinyamalale ngenxa yegunya Lakhe, nangenxa yomsebenzi Wakhe wokuqondisa. Ezinye izinto zifika zidlule ngokushesha, futhi umuntu ngeke asho ukuthi zivele kuphi noma aqonde imithetho eziyilandelayo, ingasaphathwa eyokuqonda isizathu sokufika kanye nokwedlula kwazo. Nakuba umuntu engabona noma ezwe konke okuzodlula kuzo zonke izinto; nakuba konke kumthinta umuntu, futhi nakuba umuntu angase abambe okuvamile nokungavamile ezintweni ezehlukahlukene, akakazi lutho ngentando yoMdali nengqondo Yahe engemva kwakho konke lokho asuke ekubona. Kunamaqiniso amaningi afihlekile ngemva kwalezo zinto. Ngoba umuntu uqhelelene kakhulu noMdali, ngoba akemukeli ukuthi igunya loMdali liqondisa zonke izinto, akasoze azazi futhi aziqonde zonke izinto ezenzeka ebukhosini Bakhe. Ngokwengxenye enkulu, ukulawula kukaNkulunkulu nobukhosi Bakhe kwedlula imingcele yemicabango yomuntu, yolwazi lomuntu, nokuqonda komuntu, nalokho isayensi yabantu engakufeza; amakhono esintu esidaliwe ngeke akwehlule. Abanye bathi, “Njengoba ungakaze ububone ubukhosi bukaNkulunkulu ngokwakho, ukukholwa kanjani ukuthi yonke into ithobela igunya Lakhe?” Ukubona akukhona ukukholwa ngaso sonke isikhathi; ukubona akukhona ukuqaphela noma ukuqonda ngaso sonke isikhathi. Ngakho elithi “ukukholwa” livelaphi? Ngingasho ngokuqiniseka, “Ukukholwa kuza ngamazinga nangokujula kokuqonda kwabantu, nokubona izinto ezingokoqobo neziyizimbangela zezinto.” Uma ukholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ungakuqapheli, ngokulutheka okuncane, ukulawula kukaNkulunkulu nobukhosi bukaNkulunkulu kuzo zonke izinto, khona-ke enhliziyweni yakho, awusoze wavuma ukuthi uNkulunkulu unalolu hlobo lwegunya nokuthi igunya likaNkulunkulu lihlukile. Awusoze wamukela uMdali njengeNkosi yakho, uNkulunkulu wakho.
Uma ukuphila komuntu kwehlukaniswe ngokwezinga lezinto asedlule kuzo ekuphileni nolwazi lwakhe ngokudalelwa komuntu, cishe kuyoba izigaba ezintathu. Isagaba sokuqala ubusha, iminyaka ephakathi kokuzalwa kuya eminyakeni ephakathi nendawo, noma kusukela ekuzalweni kuya eminyakeni engama-30. Isigaba sesibili ukuvuthwa, kusukela eminyakeni ephakathi nendawo kuya ekugugeni, noma kusukela eminyakeni engama-30 kuya kwengama-60. Isigaba sesithathu inkathi yokuvuthwa komuntu, sisukela ekugugeni, ekuqaleni kweminyaka engama-60, kuya ekuhambeni komuntu emhlabeni. Ngamanye amazwi, kusukela ekuzalweni kuya eminyakeni ephakathi nendawo, ulwazi lwabantu ngokudalelwa lulinganiselwe ezintweni ozizwa ngabanye; cishe alukho ngokoqobo. Phakathi nale nkathi, umbono womuntu ngokuphila nendlela ahamba ngayo emhlabeni konke kuwubuwula. Lena inkathi yobungane. Kungemva kokuba umuntu esezwe lonke uhlobo lwenjabulo nosizi lokuphila lapho ekwazi khona ukuqonda ukudalelwa, umuntu—ekujuleni kwenhliziyo yakhe—kancane kancane uqala ukubona ukungaguquki kokudalelwa, futhi abone kancane kancane ukuthi ubukhosi boMdali kubantu bukhona ngempela. Lena inkathi yokuvuthwa. Lapho umuntu eseyekile ukulwa nokudalelwa, futhi engasafuni ukulwa nakho, kodwa azi okuningi, ezithoba entandweni yeZulu, eqonda akufezile neziphambeko zokuphila kwakhe, futhi elindele isahlulelo soMdali ngokuphila kwakhe—lena inkathi yomuntu yokuvuthwa. Cabanga ngezinto ezehlukehlukene abantu abazitholile nabadlule kuzo phakathi nezinkathi ezintathu, ngaphansi kwezimo ezivamile zethuba lomuntu lokwazi ubukhosi boMdali azizinkulu kakhulu. Uma umuntu ephilela ukuba neminyaka engama-60, umuntu uneminyaka engama-30 noma elapho uyokwazi ubukhosi bukaNkulunkulu; uma umuntu efuna inkathi ende, lokho kungenzeka kuphela uma ukuphila komuntu kukude ngokwanele, uma ekwazi ukuphila amakhulu eminyaka. Ngakho ngithi, ngokuvumelana nemithetho evamile yokuba khona komuntu, nakuba lokho kuyinqubo ende kusukela ngesikhathi umuntu aqala ngaso ukwazi ngobukhosi boMdali kuya esikhathini abona iqiniso ngaso ngobukhosi boMdali, futhi kusukela lapho kuze kube yilapho ekwazi ukuzithoba khona kubo, uma umuntu engabala leyo minyaka, ayikho ngaphezu kwengama-30 noma engama-40 lapho umuntu ethola khona ithuba lokuthola imivuzo. Futhi ngokuvamile abantu baqhutshwa izifiso zabo zokuthola izibusiso; abaqondi ukuthi ingqikithi yokuphila komuntu ikuphi, abakwazi ukubaluleka kokwazi ubukhosi boMdali, futhi abalazisi ithuba eliyingqayizivele lokuphila emhlabeni lokuzwa ukuthi kunjani ukuphila njengomuntu nokwazi ubukhosi boMdali, nababona ukuthi kuyigugu kanjani ngomuntu odaliwe ukuqondiswa uMdali mathupha. Ngakho ngithi, labo abafuna umsebenzi kaNkulunkulu uphele ngokushesha, abafisa sengathi bangahlela isiphetho somuntu ngokushesha okukhulu, abafisa sengathi uNkulunkulu angahlelela umuntu isiphetho ngokushesha, ukuze bakwazi ukuthola isiqu sangempela Sakhe bese bebusiswa, banecala lokungalaleli ngokwedlulele nokuba iziphukuphuku ngokwedlulele. Futhi labo abafisayo, phakathi nesikhathi sabo esilinganiselwe, ukubamba ithuba eliyingqayizivele lokwazi ubukhosi boMdali, bangabantu abahlakaniphile, bakhaliphile. Lezi zifiso ezimbili zembula imibono emibili: Labo abafuna izibusiso ngobugovu; abacabangi ngentando kaNkulunkulu, abafuni ukwazi ubukhosi bukaNkulunkulu, abafuni ukuzithoba kubo, bafuna ukuphila ngendlela ebajabulisayo. Bayajabula; nakuba bezobhujiswa. Labo abafuna ukwazi uNkulunkulu bayakwazi ukubekela izifiso zabo eceleni, bazimisele ukuzithoba ebukhosini bukaNkulunkulu nasemalungiselweni kaNkulunkulu; bayazama ukuphatha ngomusa abantu abazithoba egunyeni likaNkulunkulu nabanelisa isifiso sikaNkulunkulu. Abantu abanjalo baphila ekukhanyeni, baphila phakathi kwezibusiso zikaNkulunkulu; nakanjani uNkulunkulu uyobancoma. Akukhathalisekile ukuthi kuthiwani, izinqumo zabantu azinamsebenzi, akukho abantu abangakusho ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu uyothatha isikhathi esingakanani. Kungcono ngabantu ukufuna umusa kaNkulunkulu, bazithobe ebukhosini Bakhe. Uma ungazibeki emseni Wakhe, yini ongayenza? Ingabe uNkulunkulu uyolahlekelwa? Uma ungazibeki emseni Wakhe, uma uzama ukuphatha, wenza isinqumo esiwubulima, futhi uwena oyolahlekelwa ekugcineni. Kulapho abantu bebambisana khona noNkulunkulu ngezinga abangakwazi ngalo, kulapho bekwamukela ukuqondisa Kwakhe, belazi igunya Lakhe, futhi baqonde abenzele khona, lapho beyoba khona nethemba, yilapho bengeke baphilele khona ize, beyothola khona insindiso.
Ngemva kokulalela konke engiqeda ukukusho, ingabe umbono wakho ngokudalelwa usushintshile? Uliqonda kanjani iqiniso lobukhosi bukaNkulunkulu ngaphezu kokudalelwa kwesintu? Ukukubeka ngamazwi alula, ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu wonke umuntu ubemukela ngenjabulo ubukhosi Bakhe namalungiselelo Akhe, futhi akunandaba ukuthi umuntu uhlupheka kangakanani enkambweni yokuphila, kungakhathaliseki ukuthi zingakanani izindlela zokukhohlakala ahamba kuzo, ekugcineni umuntu uyobuyela ekudalelweni uMdali amhlelele kona. Lobu ubukhulu obubabazekayo begunya loMdali, indlela igunya Lakhe elilawula neliqondisa ngayo indawo yonke. Yilobu bukhulu, lolu hlobo lokulawula nokuqondisa, olunesibopho futhi olunquma ukuphila kwazo zonke izinto, obenza abantu baguquguquke ngaphandle kokungenelela kothile, ukuze benze izwe lishintshashintshe futhi liye phambili usuku nosuku, unyaka nonyaka. Seniwazi wonke la maqiniso futhi niwaqonda ngokujulile; ukujula kokuqonda kwakho kuncike ezintweni odlule kuzo nasolwazini lwakho ngeqiniso, nolwazi onalo ngoNkulunkulu. Ulazi kahle kangakanani iqiniso, uwazi kahle kangakanani amazwi kaNkulunkulu, usazi kahle kangakanani isiqu nesimo sikaNkulunkulu—lokhu kumelela ukujula kokuqonda kwakho ubukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe. Ingabe ukuba khona kobukhosi bukaNkulunkulu namalungiselelo Akhe kuyoncika ekutheni abantu bayawathobela yini? Ingabe iqiniso lokuthi uNkulunkulu unaleli gunya lisho ukuthi abantu bayalithobela? Igunya likaNkulunkulu likhona kungakhathaliseki ukuthi izimo ziyini; kuzo zonke izimo, uNkulunkulu onquma futhi ahlele ukudalelwa kwawo wonke umuntu, futhi zonke izinto zenzeka ngokuvumelana nemicabango Yakhe, nezifiso Zakhe. Lokhu ngeke kushintshe ngenxa yokuthi abantu bayashintsha, futhi akuncikile ezintweni ezithandwa umuntu, ngeke kushintshwe yinoma yiziphi izinto ezenzeka esikhathini, emkhathini, nasendaweni, ngoba igunya likaNkulunkulu linguye uqobo Lwakhe. Ukuthi umuntu uyabazi futhi uyabemukela ubukhosi bukaNkulunkulu, nokuthi uyakwazi ukubuthobela, akubushintshi nakancane ubukhosi bukaNkulunkulu phezu kokudalelwa komuntu. Lokho kusho ukuthi kungakhathalisekile ukuthi umuntu unamuphi umbono ngobukhosi bukaNkulunkulu, ngeke lishintshe iqiniso lokuthi uNkulunkulu unobukhosi obungaphezu kokudalelwa komuntu ngaphezu kwazo zonke izinto. Ngisho noma ungabuthobeli ubukhosi bukaNkulunkulu, usakulawula ukudalelwa kwakho; ngisho noma ungabazi ubukhosi Bakhe, igunya Lakhe lisekhona. Igunya likaNkulunkulu neqiniso lokuthi ubukhosi bukaNkulunkulu bungaphezu kokudalelwa komuntu akuncikile kulokho okuthandwa umuntu, akushintshwa yizinto umuntu azithandayo nazikhethayo. Igunya likaNkulunkulu likuyo yonke indawo, ngawo wonke amahora, ngazo zonke izinkathi. Uma amazulu nomhlaba kuzodlula, igunya Lakhe ngeke lidlule, ngoba unguNkulunkulu uqobo Lwakhe, unegunya eliyingqayizivele, igunya Lakhe alinamingcele noma alilinganiselwa abantu, izehlakalo, noma izinto, noma umkhathi noma indawo. Ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu alawula ngazo igunya Lakhe, ubonisa amandla Akhe, uqhubeka nomsebenzi Wakhe wokuqondisa; ubusa zonke izinto ngazo zonke izikhathi, unakekela yonke into, uqondisa yonke into, njengoba ayehlale enza. Akekho ongashintsha lokhu. Kuyiqiniso; bekulokhu kuyilo selokhu kwathi nhló!
Ababi Kumele Bajeziswe Ihubo lombuso Izwi Lamashumi Amane Nanye Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
Imigomo yokusebenzisa Ubumfihlo [email protected]gdomsalvation.org